Ny famaritana ny Xiaomi CC9 Pro dia tafaporitsaka amin'ny Internet | Androidsis
Sivanina ny antsipirian'ny Xiaomi CC9 Pro
Ny Xiaomi CC9 dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy efa-bolana lasa izay. Ny marika sinoa dia namela finday roa tamin'ity tranga ity, izay natomboka teo afovoany. Nisy tsaho nandritra ny herinandro maro momba izany ny fahatongavan'ny telefaona fahatelo ao anatin'io faritra io, izay ho Xiaomi CC9 Pro. Vao haingana ny antsipiriany voalohany momba ny telefaona.
Telefaona iray izay fantatsika bebe kokoa ankehitriny. SATRIA saika ny tsipiriany rehetra dia efa tafaporitsaka amin'ity Xiaomi CC9 Pro ity. Noho io dia azontsika an-tsaina mazava ny zavatra handao antsika ity telefaona marika shinoa ity rehefa tonga tsy ho ela.
Araka ny famoahana, ity Xiaomi CC9 Pro dia hampiasa a Efijery AMOLED 6,4-inch miaraka amin'ny Full HD + vahaolana. Ao anatiny dia hiandry antsika ny processeur Snapdragon 730G. Izy io dia hiaraka amin'ny RAM 6 GB sy fitehirizana anatiny 128 GB, izay azontsika atao manitatra amin'ny alàlan'ny microSD.
Ny fakantsary dia ho iray amin'ireo tanjany. Ny sensor voalohany amin'ny telefaona dia 108 MP, araka ny nivoahany herinandro vitsivitsy lasa izay. Miaraka amin'izany dia hisy sensor roa hafa, telephoto 8 MP sy zoro 13 MP ultra-wide. Ho an'ny fakantsary eo aloha, ny marika sinoa dia hampiasa sensor 32 MP, miorina amin'ny toerana tsy misy rano mitete iray rano.
Ho tonga ihany koa ny Xiaomi CC9 Pro bateria mahazaka 4.000 mAh, Mety hanana fifanarahana amin'ny famahanana haingana ny 20 W. Noho izany dia hanatanteraka tsara amin'ny resaka fizakantena ihany koa izy. Antenaina fa ho tonga amin'ny Android 10 miaraka amin'ny EMUI 11 ho toy ny sosona fanaingoana.
Amin'ny ankapobeny dia hitantsika fa ity Xiaomi CC9 Pro ity dia haseho ho safidy mahaliana indrindra ao anatin'ny elanelam-potoana premium. Finday tena mahaliana, izay azonao antoka fa tena tianao be. Ny vidiny dia eo amin'ny 330 Euros raha hiova, izay ho vidiny lafo amin'ny telefaona toy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sivanina ny antsipirian'ny Xiaomi CC9 Pro
Sary voasivan'ny Huawei MediaPad M7
Sony dia manamafy izay telefaona misy Android 10